စစ်ကိုင်း – Ministry of Hotels & Tourism Myanmar
စစ်ကိုင်းကို ရှေးအခါက ဇေယျပူရအောင်နိုင်ခြင်းမြို့တော်ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီး စစ်ကိုင်းမင်းနေပြည်တော် ၏မြို့တော် လည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အင်းဝခေတ်တွင် မင်းသားများ၏ ပြည်နယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ စစ်ကိုင်းသည် သာသနာထွန်းကားရာ နယ်မြေဖြစ်သည်။ စစ်ကိုင်းတောင်သည် တရားအားထုတ်ရာ စခန်း များဖြင့်လည်း လူသိများလှသည်။ ဧရာဝတီမြစ်နှင့်အပြိုင် တည်ရှိနေသော စစ်ကိုင်းတောင် ရိုးပေါ်ရှိဘုန်းကြီးကျောင်းများနှင့် ဘုရားပုထိုးများ ၏ခံညားလှသောရူခင်းသည်လည်း လာရောက်လည်ပတ်သည့် ဧည့်သည်များအား အံသြလောက်စေသည်။ နာဂရိုးရာပွဲတော် ၏ထူးခြားသောယဉ်ကျေးမှုများကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ဧည့်သည်များ လာရောက် လေ့လာနိုင် သည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင်နေထိုင်ကြသူများသည် ဗမာ၊ ရှမ်း၊ နာဂနှင့် ချင်းလူမျိုး များမှ ဆင်းသက်လာသူများဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် ဗမာစကားပြောဆိုကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာတို့ကို ကိုးကွယ်ကြသည်။
ပျမ်းမျှမိုးရေချိန်မှာ ၈၀၇မီလီမီတာရှိပြီး သမပိုင်းဇုန်ရာသီဥတုဖြစ်သည်။ စစ်ကိုင်း တိုင်းသည် ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေး တိုင်းဒေသကြီး၊ ချင်းပြည်နယ်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေပြီး ၉၃၅၃၇ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းသည် သာသနာ့နယ်မြေများပေါများပြီး တရားအားထုတ်ရာ နေရာ တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ နေထိုင်သူဦးရေမှာ ၂၀၁၄ခုနှစ်တွင်(၃၀၇၁၉၄)သိန်းရှိသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း၏ ကြွယ်ဝလှသော ဘာသာရေး၊ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အမွေအနှစ်များကို ခံစားကြည့်ပါ။
စစ်ကိုင်းတိုင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ထင်ရှားကျော်ကြားသော ဘုရားများ ကိန်းဝပ်ရာ ဒေသဖြစ်သည်။ စစ်ကိုင်းတောင်ပေါ်တွင် ရာပေါင်းများစွာသော ဘုရားများကို ပုံသဏ္ဍာန် အမျိုးမျိုးဖြင့် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အချို့နေရာများသည် ထိပ်သို့ ရောက်ရန် ခရီးကြမ်းသော် လည်း ထိပ်သို့ရောက်လျှင် ရှူခင်းများမှာ စိတ်အပန်းပြေလှသည်။ ဧည့်သည်များအနေဖြင့် ရွှေရောင်လွှမ်းနေသောဘုရားများ၏ အံမခန်း ဖွယ်ရာမြင်ကွင်းများကို စစ်ကိုင်းတဝိုက်တွင် တွေ့နိုင်သည်။ ပြီးနောက် နာမည်ကြီး ဘုရားတစ်ဆူဖြစ်သော မင်းကွန်းပုထိုးတော်ကြီးကို လေ့လာနိုင်ရန် မင်းကွန်းသို့ ခရီးဆက်နိုင်သည်။ ဘုရားကြီးမှာ၁၈ရာစုတွင် ဘိုးတော် ဘုရား မင်းကြီး တည်ထားခဲ့သော ဘုရားလေးဆူအနက် တစ်ဆူဖြစ်ပြီး ထူးခြားသောဗျာဒိတ်တော် ကြောင့် အပြီးမသတ်နိုင်ခဲ့ပေ။ ထို့အပြင် လာရောက်လည်ပတ်သူများသည် ဘုံခုနှစ်ဆင့်ဝန်းရံ ထားသော မြသိန်းတန်စေတီ၏ ခမ်းနားမှူများကိုလည်း တွေ့နိုင်သည်။ ထိုစေတီမှာ ငလျင် ဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ဖူးသော်လည်း ဘုရင်တစ်ပါးက ပြန်လည်ပြုပြင်မွန်းမံခဲ့သည်။
သမိုင်းဝင်နေရာများဖြင့် လှပသော စစ်ကိုင်းတိုင်းသည် အထင် ကြီးလောက်စရာကောင်းသည့် သမိုင်းအမွေအနှစ်များနှင့်အတူ ရှေးဟောင်း အဆောက်အဦး များလည်းများစွာရှိသည်။ ရွှေဘိုရတနာမင်္ဂလာ နန်းတော်ကြီးတွင်လည်း အနုစိတ်လှသည့် ဗိသုကာလက်ရာများနှင့်အတူ ရှေးမြန်မာဘုရင်များ၏ စနစ်ကျသောစီမံမှူများကို ဂုဏ်ယူ ဖွယ်ရာတွေ့မြင်နိုင်သည်။ သာသနာထွန်းကားရာ နေရာဖြစ်သည့် အပြင်လာရောက်သူများ အနေဖြင့် ဘုန်းကြီးများ၊ မယ်သီလရှင်များ၏တရားအားထုတ်မှူများကိုပါ လေ့လာနိုင် သည်။ ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်စာရင်းဝင် ရှေးဟောင်းပျူမြို့၃မြို့ထဲမှ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည့် သမိုင်းဝင်ဟန်လင်းမြို့ကို လည်း မလွှဲမသွေ သွားရောက်လေ့လာ သင့်သည်။
အနုစိတ် ရက်လုပ်ထားသည့် ထွက်ကုန်များ
စစ်ကိုင်းသည် ၎င်းကြိမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ထွက်ကုန်များကြောင့် လူသိများပါသည်။ ကြိမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ကုလားထိုင်များ၊ စားပွဲများ၊ ဆက်တီများ၊ ပန်းလင်ပန်းများ၊ ခေါင်းအုံးများနှင့်ခြင်းများကို စစ်ကိုင်းတစ်လွှားတွင် တွေ့ရပါသည်။ ကြိမ်ထွက်ပစ္စည်း များကို စစ်ကိုင်းမြို့နယ်ရှိ တင်းတိမ်၊ မန်ကျည်းစင်နှင့် မန်ကျည်းကုန်းရွာများတွင် ပြုလုပ် ကြပါသည်။ ဒေသခံကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များသည် အရည်အသွေးကောင်းသော ကြိမ်များကို အသုံးပြု၍ ကြိမ်ထည်လက်မှုပစ္စည်းများကို ဖန်တီးကြပါသည်။ စစ်ကိုင်းတွင်တွေ့ရှိရသော ကြိမ်ပင်များကို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ တွင်လည်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကြိမ်ပင်များကို တင်သွင်း ခြင်းသည် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးကို များစွာအထောက် အကူပြုပါသည်။ ကြိမ်ထည်ရက်လုပ် သော ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ၂၀၀ကျော်သည်၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများနှင့်ဗဟုသုတများကို လာရောက်လည် ပတ်သောဧည့်သည်များသို့ ပြောပြကြပြီး ဧည့်သည်များသည်လည်း ထွက်ကုန်များကို ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ မြို့ထဲတွင် ကြိမ်ထည်လက်မှုပစ္စည်း အရောင်း စင်တာ များနှင့် ပြခန်းများစွာရှိပြီး နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်များ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
စစ်ကိုင်းတွင် ထင်ရှားသော နေရာ ၁၄ ခုရှိပါသည်။ ၄င်းနေရာများမှာ – ရွှေဘုံရတနာမင်္ဂလာ နန်းတော်၊ ဟန်လင်းရှေးဟောင်းမြို့တော်၊ အညာသီဟတော်၊ မိုးညှင်းသမ္ဗုဒ္ဓေဘုရား၊ ဗောဓိတစ်ထောင်၊ မင်းကွန်းပုထိုးတော်ကြီး၊ ညောင်ကန် ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု၊ မင်းကွန်းခေါင်းလောင်းကြီး၊ တြိလောကဆရာတော်ကြီး လှိုဏ်ဂူ၊ ဖိုဝင်တောင်၊ အလောင်း တော်ကဿပ၊ ကောင်းမှုတော်ဘုရား၊ အရိယာဝံသဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ မြသိန်းတန် ဘုရားတို့ဖြစ်ပါသည်။
Known asaplace of beautiful landmarks and historical sites, Sagaing is abundant with old buildings and places rich with impressive history and heritage of the region and its people. The Shweboyadanar Mingla Palace boasts detailed architecture, civilisation, and systematic management of the Myanmar Kings. As the region is also well-known asareligious centre, tourists get to visit many monasteries that dot the area to learn more about the architecture as well as witness the monks’ or nuns’ ways of conducting prayers, rituals, and meditation. Visitors should not miss the chance to visit the historical Hanlin Ancient City which is one of the three Pyu cities on UNESCO’s World Heritage Site list. Discover more pagodas, springs and antique remains and inscriptions found in the timeworn city.
ရွှေဘိုရတနာမင်္ဂလာနန်းတော်ကို ၁၁၁၅ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး တစ်ဖက် စီတွင် ၂၀၀မီတာမြင့်မားသည့် နံရံများနှင့် ဂိတ်ကြီး၁၀ခု ရှိပါသည်။ နန်းတော်ထဲ တွင် ခန်းမပေါင်း များစွာရှိပြီး ခန်းမတိုင်းကို လှပသေသပ်သော၊ အနုစိတ်ကျသော အနုပညာလက်ရာများနှင့် တန်ဆာဆင်ထားပါသည်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ မြေအောက်နန်းတော်တွင် ရှေးကျ သောမှတ်တမ်းများနှင့် ပန်းချီကားချပ်များစွာကို တွေ့ရှိရပါသည်။ နန်းတော်ကို၁၉၉၉ခုနှစ် တွင် ပြန်လည်ပြုပြင် တည်ဆောက်ခဲ့ပါ သည်။
ဟန်လင်းသည် ၄င်း၏ ဗိသုကာလက်ရာများကြောင့် ကျော်ကြားပါသည်။ ပျူမြို့၏ မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကြီးမားသောရွာကြီးတစ်ရွာလည်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ယူနက်စကို၏ ကမ္ဘာ့ရှေး ဟောင်းအမွေ အနှစ်များထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်အဖြစ် ဖော်ပြခြင်းခံရပြီး ရှေးဟောင်းမြန်မာ ပျူလူမျိုးများ၏ အံ့သြ လောက်စရာ ဂုဏ်ကျက်သရေနှင့် ပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်း၏ နွေဦးရာသီကြောင့်လည်း လူသိများပါသည်။
အညာသီဟတောသည်ခင်ဦးမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပြီး ဧရာဝတီမြစ်အလယ်တွင် တည်ရှိ ပါသည်။ ဗုဒ္ဓ၏အမွေအနှစ်များကို ဌာပနာထားပြီး မြစ်အနီးတွင်တည် ဆောက်ထားပါသည်။ အလင်း ရောင်သည် အညာသီဟတော်၏ မျက်နှာပြင်ပေါ် တွင်ရှိသော ခမ်းနားကြီးကျယ် သည့် ဒီဇိုင်းများကိုထိတွေ့သည့်အခါတွင် ထုတ်လွှတ်လိုက်သောရောင်စဉ်တန်းများသည် မြင်ရသည့်နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည့်များအတွက် အသက်ရှူမှားလောက်သော မြင်ကွင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
မိုးညှင်းသမ္ဗုဒ္ဓေဘုရားကို ၁၉၃၉ခုနှစ်တွင်မိုးညှင်းဆရာတော်ဦးသုမန တည်ထားခဲ့ သောဘုရားတစ်ဆူဖြစ်ပြီး ၄င်း၏ဗိသုကာလက်ရာများသည် အလွန်အံ့သြစရာကောင်း သဖြင့် ကမ္ဘာတစ်လွှား ကျော်ကြားလှပါသည်။ ဘုရား၏အဆန်းကြယ်ဆုံး အပိုင်းသည် စေတီဖြစ်ပြီး အဆင့်တိုင်း၏ အတွင်းနှင့် အပြင်နံရံတွင်ရှိသော ပစ္စရံတွင် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် ပေါင်း ၅၈၂၃၆၃ခုရှိပါသည်။ တန်ဆောင်းမုန်းလပြည့်နေ့တွင်ပွဲတော် ကိုစည်ကားစွာကျင်းပ ပြီး လာရောက်လည်ပတ်သူများ ပါသည်။
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် ၁၀၀၀ ရှိသောကြောင့် ဗောဓိတစ်ထောင်ဟုခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။ ဆရာတော်ဦးနာရဒသည် ၄င်းသက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်အခါက ဗောဓိပင်များ စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး ဘုရား များနှင့် ဗုဒ္ဓရုပ်တုများကို တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ၄င်း ဧရိယာအနီးတွင် ရပ်တော်မူ ဘုရားများတွင် ကမ္ဘာ့ဒုတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့် ဘုရားတစ်ဆူရှိပါသည်။ ရုပ်တု ကိုယ်ပိုင်းအ တွင်းရှိ လှေကားထစ်များတွင် လှပစွာခြယ်သထားသော နံရံဆေးရေး ပန်းချီများကို လာ ရောက်လည်ပတ်ကြသော ဧည့်သည့်များ လွန်စွာ မြတ်နိုးကြသည်။ အောက်ပိုင်းရှိ လှေကား ထစ်များ၏ နံရံများတွင်ငရဲဘုံများ ဖော်ကြူးရေးဆွဲထားသည်မှာကြည့်ရှုသူအချို့အဖို့ ထိတ် လန့်ဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးပုထိုးတော်ကြီးဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့သော မင်းကွန်းပုထိုး တော်ကြီးသည် ထုထည်အကြီးမားဆုံးပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားကြီးပြီးလျင် နိုင်ငံပျက်သုဉ်း လိမ့်မည်ဟု အနာဂတ်ဟောပြောမှုတစ်ခုကြောင့် ၄င်းကိုပြီးစီးအောင် တည်ဆောက်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။၂၉မီတာမြင့်သော ခြင်္သေ့နှစ်ကောင်သည် ဘုရား၏ အစောင့်အကြပ်အဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။ ကြီးမားသော ဝင်ပေါက်ကြီးသည် မြစ်ကို မျက်နှာမူလျက်ရှိပြီးလှပစွာ တန်ဆာ ဆင်ထားပါသည်။ ၁၈၃၈ခုနှစ်တွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့ သော ငလျင်ကြောင့် ထုထည်တွင်ကြီးမား သော အက်ကြောင်းကြီးများ ရှိနေပါသည်။
ညောင်ကန်တွင် တွေ့ရှိရသော ဗုဒ္ဓအမွေအနှစ်များသည် ဟန်လင်းထက် ပို၍ရှေးကျ၍ မြန်မာ့မြို့ပြလူနေမှု တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးကြောင်း ဖော်ပြနေပါသည်။ လယ်ယာမြေများတွင် အလျား၊ အနံ ၅ မီတာ စီရှိသော အကွက်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အကွက် ၁၂ ကွက် တွင် ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာ၌ ရှိခဲ့သော အမွေအနှစ်များ၊ အရိုးများ၊ လက်နက်များ နှင့်ကျောက် ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများပြည့်နှက်နေပါသည်။ နောက်ထပ်လေ့လာ တွေ့ရှိသောအုတ်နံရံ တစ်ခုသည် နိုင်ငံ၏လူနေမှုအဆင့်အတန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကို ဖော်ပြနေပါသည်။
၄မီတာအမြင့်ရှိသော မင်းကွန်းခေါင်းလောင်းကြီးသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တီးလို့ ရသောအကြီးမားဆုံး ခေါင်းလောင်းကြီးဖြစ်ပါသည်။ ၄င်း၏အပြင်ဘက်ကို သစ်သား လုံးနှင့် ထုနှက်ရိုက်ခတ်ရပါသည်။ ခေါင်းလောင်း၏မျက်နှာပြင်တွင် ထွင်းထုထား သော ၅၅၅၅၅ ၏အဓိပ္ပါယ်သည် ၄င်း၏ ပိဿာချိန် ဖြစ်ပြီး တန် ၉၀ ခန့်ရှိပါသည်။ ခေါင်းလောင်း သည် မင်းကွန်းပုထိုးတော်ကြီးအနီးတွင် တည်ရှိပါသည်။
တြိလောကဂုရုလှိုဏ်ဂူအတွင်းရှိနံရံများပေါ်တွင် ရေးဆွဲထားသော နံရံ ဆေးရေးပန်းချီများသည် မြန်မာတို့၏ထူးခြားပြောင်မြောက်လှသော အနုပညာလက်ရာ များနှင့်ဗိသုကာလက်ရာများကိုဖော်ပြနေပါသည်။ မြန်မာတို့၏ပန်းချီအနုပညာလက်ရာများသည် ၁၁ရာစုနှင့် ၁၃ ရာစုကြားတွင် စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ပင်းယ၊ စစ်ကိုင်း၊ အင်းဝနှင့် အမရပူရခေတ်များတွင် ထွန်ကားလာခဲ့ပါသည်။ နံရံဆေးရေး ပန်းချီများသည် ဗုဒ္ဓ၏ သမိုင်းကြောင်းကို ကိုယ်စားပြုဖော်ပြနေပြီး အနုစိတ်လက်ရာ များကြောင့် အသိအမှတ်ပြု လေးစားချီးကျူးမြတ်နိုးဖွယ် ဖြစ်ပါသည်။
ဖိုဝင်တောင်ကိုကျောက်သားများဖြင့်ထုဆစ်ထားသည့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များ ဖြင့်အဓိကတန်ဆာဆင်ထားပါသည်။ ဖိုဝင်တောင်သည် ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်အမွေ အနှစ်များကြောင့် လူသိများထင်ရှားပါသည်။ ပျူလဝဘုရင်နှင့်တောင်ပြုံးမှ ဘုရင် တို့သည်ဗုဒ္ဓပုံတော်များကို တူညီသောပန်းပုဆရာကို ထုလုပ်ပုံဖော်ခိုင်းစေခဲ့ခြင်း ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုဝင်တောင်ပေါ်တွင် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ပေါင်း ၄၄၆,၄၄၄ ခုရှိခြင်း သည်လည်း ဖိုဝင်တောင်သို့ လာရောက်လည်ပတ်ကြသော ခရီးသွားများကို အံ့သြ မှင်သက်စေပါသည်။
အလောင်းတော်ကဿပသည် ကနီမြို့နယ်၊ မဟာမြိုင်အမျိုးသားဥယျာဉ်၏ အချက်အချာကြသည့်တောတွင်းတစ်နေရာ၌တည်ရှိပါသည်။ လာရောက်လည်ပတ်သူ များသည် ကနီ သို့မဟုတ် မုံရွာမှ လာရောက်နိုင်ပြီး ကျေးရွာအမြောက်အများနှင့် သစ်လုံးယာယီစခန်းများကိုဖြတ်ကျော်ကာ အလောင်းတော်ကဿပသို့ ရောက်ရှိနိုင် ပါသည်။ ရှည်ကြာလှသောခရီးစဉ်၏ပင်ပန်းမှုများကိုလည်း လှိုဏ်ဂူအနီးရှိ သစ္စာရေတွင်း၌ အပန်း ဖြေအနားယူနိုင်ပါသည်။
ရာဇမုနိစူဠဟူ၍လည်းအမည်တွင်သော ကောင်းမှုတော်ဘုရားသည် အင်းဝ မြို့မှ၁၀ ကီလိုမီတာအကွာတွင် တည်ရှိပြီး အေဒီ၁၆၃၆တွင် သာလွန်မင်းကြီးနှင့် သူ၏ သားတော်တို့ တည်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘဲဥပုံသဏ္ဍာန် တည်ထားသောကြောင့်လည်း အခြားသော မြန်မာဘုရားများနှင့်မတူ ကွဲပြားနေပါသည်။ ထုထည်ကြီးမား လှသောအခုံးကြီး သည်၄၆မီတာအထိမြင့်ပြီးဘုရား၏အခြေတွင်လည်း ကျောက်တိုင် ပေါင်း၈၁၂တိုင်ရှိ ပါသည်။ တိုင်တစ်တိုင်ချင်းစီတွင် အခေါင်းပေါက် တစ်ခုစီနှင့် ထိုအခေါင်း ပေါက်များ အတွင်း၌လည်း နတ်ရုတ်တစ်ရုပ်စီ ရှိပါသည်။
အရိယဝံသဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည် စစ်ကိုင်းတောင်ပေါ်တွင် တည်ရှိ သော ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါသည်။ထိုကျောင်းတွင် သီတင်းသုံးတော်မူခဲ့သော ဘုန်းတော်ကြီး တစ်ပါး၏အမည်ကိုအစွဲပြု၍ အရိယာဝံသကျောင်းဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ ပါသည်။ သစ်သားဖြင့် အသေးစိတ်မွမ်းမံထားသော လက်မှုပညာများနှင့် သေသပ်လှ သောဗိသုကာလက်ရာတို့သည် ခရီးသွားများအား ဆွဲဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ဆူညံမှုအပေါင်းကင်းဝေးကာ လာရောက်လည်ပတ်သူများအား တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှု ကို ခံစားရစေပါသည်။
အလွန်အမင်းသပ္ပါယ်လှသော မြသိန်းတန်ဘုရားအား ဘကြီးတော်ဘုရားသည် ၄င်း၏နောက်ဆုံးမိဖုရားကို အောက်မေ့သတိရခြင်းအားဖြင့် တည်ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားအတွင်းနှင့်တန်ဆောင်းခုနှစ်ခုတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ ဒဏ္ဍာရီလာမာရုတောင် တန်းများနှင့် စူဠာမဏိဘုရာပုံတို့ကို ပုံဖော်ရေးဆွဲထားခြင်းသည် အခြားသောမြန်မာ ဘုရားများနှင့်မတူဘဲ ကွဲပြားနေပါသည်။ မြသိန်းတန်ဘုရားသည် ၁၈၃၈ခုနှစ်တွင် ငလျင် ဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးသွားသော်လည်း ၁၈၇၄ခုနှစ်တွင် မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးသည် နဂိုမူလအတိုင်း ပြန်လည်မွမ်းမံခဲ့ပါသည်။
နာဂလူမျိုးစုများသည် ရိုးရာဝတ်စုံများကိုဝတ်ဆင်ကာ နာဂရိုးရာ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ကိုကျင်းပကြပါသည်။ ပွဲတော်တွင်အပြန်အလှန် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးခြင်း၊ ရိုးရာသီချင်းများသီဆိုခြင်း၊ ရိုးရာအကအလှများကခုန်ခြင်းစသည်များသည် မြန်မာ လူမျိုးစုများ၏ ရိုးရာဓလေ့များကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နာဂရိုးရာနှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်ကိုဇန်နဝါရီလ (၁၄)ရက်နေ့မှ (၁၆)ရက်နေ့အထိ(၂) ရက်ကြာ ကျင်းပလေ့ရှိပါ သည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ယင်းမာပင်မြို့ အလောင်းတော်ကဿဖ အမျိုးသားဉယျာဉ်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သော အလောင်းတော်ကဿဖဘုရားပွဲတော်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထင်ရှားကျော်ကြားသော ပွဲတော်များထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ဒေသခံ ပြည်သူများသည် ပွဲတော် ကျင်းပြခြင်းဖြင့် နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည်များကိုလည်း မြို့တော်၏သဘာဝ အလှ အပများကို ခံစားရင်းပွဲတော်ကို ပါဝင်ဆင်နွှဲရန်ဆွဲဆောင် လျက်ရှိပါသည်။ ဘုရားပွဲတော်ကို နှစ်စဉ် မတ်လ (၂၀)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပလေ့ရှိ ပါသည်။
ကောင်းမှုတော်ဘုရားပွဲတော်ကို နှစ်စဉ်တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့တွင် ကျင်းပလေ့ ရှိရာ ဒေသခံလူမျိုးများသည် နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည်များအား ထူးခြားဆန်းပြား သော မြင်ကွင်းများကို ဖန်တီးခြင်းဖြင့် ဆွဲဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ အခြားရွာများမှ ရွာသူရွာသား များသည် လက်ဖြင့်ရက်လုပ်ထားသော အဝတ်အစားများ၊ နှီးဖြာများကို သယ်ဆောင်လာ၍ ရောင်းချလေ့ရှိပါသည်။ ကောင်းမှုတော်ဘုရားပွဲတော်သည် နိုဝင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့မှ (၁၂) ရက်နေ့ အထိ (၉)ရက်တိုင် ကြာမြင့်လေ့ရှိပါသည်။